Mutengi Nyaya - Linqing Xinri Precision Bearing Co., Ltd.
XRL Co., ine yakasimba tekinoroji timu neJapan mainjiniya kugadzirisa matambudziko akasiyana mukushandisa uye kushandisa mabearings edu.
Kunze kwekutengesa mudzimba, XRL inotakura yakatotengesa kune dzinopfuura nyika zana nemakumi maviri.
K inongotarisira kubatira pamwe nevagadziri vakagadzira nemhando yepamusoro mabearings.Anofanira kushandisa XRL kutakura kutsiva SKF mabheji pamusika wekupedzisira
Isu tinoongwa nekuda kwekuvimba kwake, haatauri zvakanyanya uye akaisa muedzo kubva kwatiri.Ari kutora mhando munzvimbo yakakosha uye isu taive nekukosha kwakafanana mune izvi.
Mushure mekutongwa kwekutongwa, akange aisa maodha akati wandei kubva kwatiri zvakare, uye tiri kutaura kuti hurongwa hutsva huri kuuya izvozvi.
Isu tine chinangwa chekumusimudzira kuti ave mumiriri wemhando yedu yeXRL muPakistan.
Russia imusika mukuru wekushandisa.Asi semutemo weanti-dumping, Chaive chakaomesesa kupinza mutengi kubva kuChina.Semakore mazhinji ruzivo rwekubatana neshamwari dzeRussia uye vatinoshanda navo, isu tine akura ekutumira mberi anogona kugadzira chekufambisa kubva kuMalaysia kana Thailand, inogona kuchengetedza zvakawanda kune mutengi.Tinogona kugadzira Thailand neMalaysia CO kuti mutengi aite tsika yemvumo.
Hukama hweAfrica nesu hwakangofanana nehwehama dziri kure nevavakidzani vepedyo.Pakutanga, J akatanga kubva pazvimedu zvimedu zvimedu zvekuenzanisa kuyedza mhando uye mhinduro yemusika.Gare gare akawedzera huwandu hweodha nguva nenguva, Kunyangwe munguva yakaoma kwazvo yekoronavirus muna Kubvumbi 2020, akaisawo odha imwe kwatiri, tinotenda zvikuru nerutsigiro kubva kwaari.Semhando yepamusoro uye runako rwekurongedza kweXRL mabearings, yakatengeswa kunze nekukurumidza mukati memazuva mashoma mushure mekusvika pachiteshi.
N ndiye mumiriri wedu muPeru, uye aive mumiriri wedu wekutanga munyika dzeSouth America.Yakatanga kubva kune yekutanga diki odha uye yakaunzwa LCL, Asi ikozvino anogona kuodha 1 * 40FT mudziyo mwedzi wega wega.Zvino, isu hatisi chete bhizinesi shamwari zvakare shamwari dzakanaka muhupenyu.
Kuve mumiriri wedu nerudzi rweXRL, tinomupa chipo chekushambadza mahara, senge mapeni nemaT-shirts ane XRL LOGO, uye tinopawo kuchengetedzwa kwemusika uye sevhisi yemhando yepamusoro, Isu tinogadzira musika takabatana.Uye tinovimba kuti achave mumiriri mukuru munyika dzeSouth America munguva pfupi iri kutevera.
Isu tinosangana kuShanghai kuratidzwa 2016. Isu tinoita OEM nemhando yake yeT, Aive nemirairo yakanaka yehuwandu makore ega ega uye mabearings anotengesa zvakanaka muUkraine musika.
Y zvakare kubva kuUkrain, Aiita bhizinesi rezvimedu zvemotokari munharaunda, aienda kuChina kakawanda gore rega rega uye kutenga, ainyanya kutiraira mabearings brand LADA, VPZ, VBF, SPZ Etc.
M akatiwana kuburikidza newebhusaiti yekambani, uye akatoisa maodha mashanu izvozvi.Kunyangwe huwandu hwemaodha husina hukuru, hune mukana mukuru wekusimudzira.Uyezve, ForVietnamesemusika, takanga tine ruzivo rwakawanda pamusika uyu, tarisira mhando yepamusoro mabearings tinogonawo kuvapa COPE certificated kuti tivabatsire kuita tsika clearance ine yakaderera kupinza basa.